Il-76 gauges (gyro, elu etc.) anaghị egosi.
Il-76 gauges (gyro, elu etc.) anaghị egosi. 11 ọnwa 2 izu gara aga #1446
Ndewo, M ebudatara Il-76 site na ebe a, ọ dị ka nke dị mma, mana ọnụego egosighi, kama, ọ bụ naanị n'azụ ihe nlele ahụ. Yabụ na naanị otu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke nwere gauges, enwekwara m fsx uzuoku. Onwere onye maara ndozi maka nke a?
Oge ike page: 0.292 sekọnd